Ciidamada Galmudug oo Howlgal dad lagu qabqabtay ka sameeyay Gaalkacyo. | Somaliweyn
Ciidamada Galmudug oo Howlgal dad lagu qabqabtay ka sameeyay Gaalkacyo.
Booliska Maamulka Galmudug oo ay wehlinayeen kuwa NISA ayaa xalay howlgal qorsheysan waxaa ay ka fuliyeen Xaafado katirsan Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Saraakiisha Galmudug waxay sheegeen inay ku raad joogaan rag kale oo ay sheegeen inay ka Ganacsadaan waxyaabaha maanka dooriya, kuwaas oo ku dhuumaaleysanaya Xaafado ka tirsan Magaalada Gaallacyo.
Dhanka kale maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxay wadeen howlgallo ay ku dagaalamayeen waxyaabaha maanka dooriya, iyaga oo dhowr jeer qabtay maandooriye farabadan oo khamri ah iyo dad ka Ganacsanayay.